Qaababka Hal -abuurka ugu Fiican ee PowerPoint | Madasha Mobile -ka
Moodooyinka PowerPoint Hal -abuurka ugu Fiican
Eder Ferreno | 15/10/2021 13:00 | Microsoft PowerPoint, Qalabka otomaatiga
PowerPoint waa barnaamij loo isticmaalo deegaanno badan, min ganacsi ilaa waxbarasho. Marka aan sameyneyno bandhig waxaan dooneynaa inaan helno tusaalooyin taxane ah oo wax tar u leh, kuwaas oo naga caawiya hagaajinta farriinta la gudbinayo. Taasi waa sababta dad badan raadinaya qaabab PowerPoint hal abuur leh. Naqshado asal ah iyo kuwo kala duwan oo naga caawiya sameynta bandhigyo wanaagsan.
Markaas ayaannu kaaga tagnay Moodooyinka PowerPoint Hal -abuurka ugu Fiican, si aad awood ugu yeelatid inaad abuurto bandhigyo aad u xiiso badan iyaga oo mahadsan. Waxaa jira nashqado badan oo suuqa laga heli karo, marka waxaad mar walba heli kartaa template ku habboon waxaad raadineyso.
Habyaaladan aan hoos kuugu daynayno waa bilaash mar walba, si aadan u bixin lacag si aad ugu soo dejiso PC -gaaga oo aad awood ugu yeelatid inaad kala shaqeyso soo bandhigiddaada. Xulashada qaab -dhismeedyada qaybahan waa mid ballaaran, laakiin waxaa jira qaar ka sarreeya inta kale marka la eego arrintan.
1 Qaab -dhismeedka Biyaha Buluugga ah
2 Template leh nalalka iftiinka
3 Template leh qaloocyo firfircoon
4 Istaraatiijiga leh warqad googo badan leh
5 Stencil leh garaacyo midab leh
6 Template leh isku xirnaanta farsamada
Qaab -dhismeedka Biyaha Buluugga ah
Haddii aad raadinayso qaabab PowerPoint hal abuur leh, had iyo jeer waa faa'iido leh in la adeegsado naqshadaha farshaxanka loo waxyooday. Kani waa kiiska tusaalahan koowaad ee liiska, halkaas oo midab -biyoodka buluugga ah uu kaalin hoggaamineed ka leeyahay dhammaan bogagga bandhiggan. Waa naqshad geesinimo leh oo cajiib ah, laakiin waa mid kaa caawin doonta inaad qof walba fiiro gaar ah u yeelato inta lagu jiro bandhiggan, maxaa yeelay waxay is -beddeshaa inta u dhexaysa bogagga. Tani waa wax ka dhiga mid aad u xiiso badan oo firfircoon.
Intaa waxaa dheer, waxay ku saabsan tahay soo bandhigid u shaqayn kara dhammaan noocyada isticmaalayaasha. Waxaa loo adeegsan karaa bandhigyada waxbarashada, shirkadaha, laakiin waxay ku habboon tahay dadka hal -abuurka leh. Dhexdeeda waxaan ka helnaa wadar ahaan 28 bog oo aan awoodi doonno inaan tafatirno oo aan habaynno mar walba. Sidan ayaan u awoodi doonnaa inaan u abuurno bandhiggaas qumman, kaas oo ah waxa laga raadinayo arrintan.
Qaabkan midab -buluugga ah ee buluugga ah waa lagala soo bixi karaa bilaash, laga heli karo xiriirkan. Haddii aad raadinaysay naqshad cajiib ah oo farshaxanku dhiirrigeliyay oo mar walba danta dadka sii hayn doonta, markaa shaki la'aan waa ikhtiyaar wanaagsan in la tixgeliyo.
Template leh nalalka iftiinka
Nalalka nalalka waa wax ku xiran xaalado badan hal -abuurka. Lahaanshaha fikrad wanaagsan ama kacaan waa wax lagu matali karo sawirro ama sawirro nalalka iftiinka ah, waxaan xitaa u haysannaa weedho. In la dhaho guluubka nalka qof ayaa shidan waa hab loo sheego in ay fikrad fiican haysteen. Kani waa mawduuc aan ku adeegsan karno soo bandhigid, oo leh qaabab badan oo PowerPoint hal abuur leh oo ku saleysan mawduucan. Waxaan kaaga tagaynaa mid aad hubaal ahaan jeceshahay.
Soo bandhigidani waxay leedahay naqshadeynta iyadoo ay joogaan nalalka ku xeeran. Waa ikhtiyaar u fiican kuwa soo bandhigaya fikrad ama fikrad cusub mashruuc. Intaa waxaa dheer, qaab -dhismeedkiisu waa hal -abuur, laakiin sidoo kale wuxuu ilaaliyaa qaab -dhismeed gaar ah. Sidaa darteed, waxaa loo adeegsan karaa xaalado badan, xagga ganacsiga iyo waxbarashada labadaba. Waa ikhtiyaar aad u badan oo laga fiirsado arrintan.
Qaabkan PowerPoint ayaa lagu heli karaa bilaash, waxaa laga heli karaa xiriiriyahan. Haddii aad xiisaynaysay naqshad leh nalalka iftiinka si aad u muujiso inaad u soo bandhigi doonto sheeko cusub ama fikrad aasaasi u ah bandhiggan, shaxdan waa hubaal ikhtiyaar aad u fiican. Intaa waxaa dheer, macno malahan haddii aad ka shaqeyso shirkad ama aad ku bixinayso bandhigan fasalka dhexdiisa, labada kiisba si fiican ayey u shaqeyn doontaa.
Template leh qaloocyo firfircoon
Sidii aan bilowgii sheegnay, naqshado badan oo ku jira qaab -dhismeedyadan PowerPoint ee hal -abuurka ah waxaa dhiirrigeliyay farshaxanka. Naqshad xiiso leh, oo leh shey farshaxan oo cad waa shaxdan leh qalooca firfircoon. Waa naqshad leh dhaqdhaqaaq badan oo weli xiiso u leh dhammaan bogagga, sidaa darteed waa hab wanaagsan oo dadka ka soo qaybgalaya soo -jeedintaas lagu hayo xiiso iyo feejignaan mar walba.
Waxaan ka helnaa 25 bog oo ku jira, oo aan awoodi doonno inaan u habaynno sida aan jecelnahay. Waxaan ku dari karnaa garaafyo, waxaan beddeli karnaa font ama cabbirka font ama waxaan ku dari karnaa astaamo ama sawirro. Tani waxay noo oggolaan doontaa inaan abuurno soo -bandhigga ugu dhammaystiran ee suurtagalka ah, annagoo ka dhigeyna naqshaddaas cajiibka ah ee bogagga sidii asalka wanaagsan oo xiisaha leh. Intaa waxaa sii dheer, bogaggaani waxay la jaan qaadayaan PowerPoint iyo Slides -ka Google, si aad u adeegsan karto softiweerka adiga kugu habboon mar walba.
Sida aad u jeeddo, wuxuu isu soo bandhigaa naqshad casri ah, dhiirranaan iyo dhiirigelin cad oo farshaxanka. Markaa waxay si dhammaystiran ula kulmaysaa baadi -goobka shay -abuurka PowerPoint ee hal -abuurka ah. Template Tani waxay noqon kartaa kala soo deg linkigaan bilaash. Ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay kuwa raadinaya naqshad midab leh, laakiin yaa awoodi doona inay u adeegsadaan xaalado badan. Naqshadani waxay leedahay kala -duwanaansho weyn, taas oo muhiim ah in la tixgeliyo.
Istaraatiijiga leh warqad googo badan leh
Naqshadaha farshaxanka leh oo leh midab badan ayaa aad ugu badan qaababka PowerPoint ee hal-abuurka ah. Tani sidoo kale waa kiiska ku jira shaxdan in wuxuu leeyahay naqshad goyn ah oo midabyo badan leh. Waa soo jeedin leh midab iyo dhaqdhaqaaq, iyada oo ay ugu wacan tahay qaababka kala duwan ee ay soo bandhigto. Tani waa wax inaga caawiya inaan si muuqaal ah isu aragno horteeda taxane ah bogag aad u xiiso badan, kuwaas oo ilaalin doona firfircooni wanaagsan inta la soo bandhigayo.
Waxaan helnaa wadar ahaan 25 bog oo la beddeli karo. Waxaan ka beddeli karnaa dhinacyo badan, sida midabada ama farta. Intaa waxaa dheer, waxaa suurtagal ah inaan ku darno sawirro, astaamo ama garaafyo. Xitaa waa suurtogal in la beddelo qaabka iyaga, si aan u helno bandhig ku habboon waxa aan u baahan nahay. Awood u lahaanshaha in la habeeyo dhammaan goobahan waxay ka caawineysaa in loo adeegsado jawiga ganacsiga, laakiin sidoo kale jawiyada hal abuurka ama waxbarashada.
Qaab -dhismeedka leh nashqaddan warqadda ee midab -kala -duwan leh waa lagala soo bixi karaa bilaash, waxaa laga heli karaa xiriiriyahan. Waa naqshad aad u soo jiidasho leh, oo wax ku biirin doonta farriintaas hal -abuurka ah ee aad rabto inaad ku gudbiso bandhiggaaga. Sidii kiiskii hore, qaab -dhismeedkani wuxuu la jaan qaadayaa PowerPoint iyo Slides -ka Google. Waxaad u adeegsan kartaa oo aad u habayn kartaa sida aad jeceshahay labada barnaamij ee PC -gaaga.
Stencil leh garaacyo midab leh
Waxaan ku sii wadnaa qaab -dhismeedyada PowerPoint ee hal -abuurka leh oo leh waxyaabo farshaxan. Qaab -dhismeedkani wuxuu nooga tagaa burushyo midab leh, oo ku daraya qayb xiiso leh bogag kasta, iyo sidoo kale inuu yahay hab aad u fudud oo mid kasta loogu dari karo midab. Waxa ugu fiican oo dhan, midabka waa la beddeli karaa, si isticmaale kastaa ula qabsado template -kaan siday u jecel yihiin. Sidan, waxay kuu suurtogal noqon doontaa inaad abuurto soo -jeedin abuureysa saameynta ugu weyn iyadoo ay ugu wacan tahay adeegsigaaga midabka.
Qaab -dhismeedkaani wuxuu la jaan qaadayaa Slides -ka Google (Bandhigyada Google ayaa laga heli karaa Google Drive) iyo PowerPoint. Waxaad ku tafatiri kartaa labada barnaamijba dhibaato la'aan. Intaa waxaa sii dheer, dhammaan boggaggiisa waa la habeyn karaa, si aad ugu dari karto waxyaabo ay ka mid yihiin sawirrada, astaamaha ama garaafyada, iyo sidoo kale inaad beddesho midabada ama farta ku dul taal. Waxaa jira 25 nashqadood oo kaladuwan oo kala duwan ama noocyo ah oo ku jira shaxdan.
Sida inta kale ee hal -abuurka PowerPoint hal -abuurka ah ee liiskan ku jira, shaxdan oo leh garaacyo midab leh waa lagala soo bixi karaa bilaash kombuyuutarkeena, waxaa laga heli karaa xiriiriyahan. Qaab-dhismeed kale oo farshaxan wanaagsan leh, ayaa na siinaya xulashooyin is-habeyn badan. Waad ku mahadsan tahay tan, qof walba wuxuu awoodi doonaa inuu ku isticmaalo deegaankiisa sidaas darteedna wuxuu abuuri doonaa bandhig muuqaal ahaan aad u xiiso badan.
Template leh isku xirnaanta farsamada
Ugu dambayn qaabyaaladan PowerPoint ee hal -abuurka ah waa mid ku dhiiraday farsamada, iyada oo ay ugu wacan tahay naqshaddeeda leh xiriiro. Waa naqshad aad u danayn karta marka ay tahay inaan soo bandhigno mawduucyada sida Internetka, booska, xannibaadda ama farsamada guud ahaan. Intaa waxaa dheer, waxay isticmaashaa dhowr midab, sidaa darteed waxay u haysaa naqshad xiiso leh oo soo jiidasho leh mar walba kuwa ka soo qeybgalaya bandhiggan.
Waxaa jira wadar dhan 25 bogag ama qaabab kala duwan lagu hagaajin karo bandhiggan. Sida qaab -dhismeedyadii hore, waxay la jaanqaadi kartaa PowerPoint iyo Slides -ka Google, si aan u adeegsanno barnaamijka noogu raaxada badan markaan tafatirno oo sidaas noo abuurno bandhigga saxda ah. Waad beddeli kartaa midabada dhammaantood, sidoo kale waxaad ku dari kartaa garaafyada, sawirrada, astaamaha ama waxaad u habayn kartaa font -ka aad rabto inaad isticmaasho.
Qaab -dhismeedkan oo leh naqshaddan dhiiri -gelinta teknolojiyadda ayaa si bilaash ah loogu soo dejisan karaa kombuyuutarkaaga, waxaa laga heli karaa xiriiriyahan. Qaab -dhismeed wanaagsan haddii aad leedahay soo -jeedin leh mowduucyo la xiriira farsamada ama haddii ay si fudud u tahay naqshad adiga kuu xiiso badan. Waxaad awoodi doontaa inaad u habayso sidaad jeceshahay si aad ugu abuurto boggag ku habboon bandhiggaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Qalabka otomaatiga » Microsoft PowerPoint » Moodooyinka PowerPoint Hal -abuurka ugu Fiican
20 -ka kulan ee ugu fiican Mac bilaashka ah
Signal vs Telegram: waa maxay kala duwanaanshaha jira?